Ngokokuqala ngqá 5 ngendlu hatchback Korean "Hyundai Getz" olwaqala ngo-2002 e-Geneva Motor Show. Ngesikhathi nomkhiqizi kwesizini uye libhekene ke njengendlela entsha, ukonga futhi iphephile imoto idolobha design stylish and design ingaphakathi. Hhayi-ke, ake sibheke ukuthi aqhuba kanjani Ubuyisé zalolu hlobo locingo.
"Hyundai Getz" - isithombe kanye nomklamo ukubuyekeza
Umklamo hatchback ukuthobeka samanje nomusa. ngalé wakhe smiling kwenza "Hyundai Getz" omunye emotweni ezigqame stylish kunazo ekilasini yayo. Ngisho kwamanje, naphezu kweqiniso lokuthi uklanyelwe kuka-10 eminyakeni edlule, hatchback akakwazi ngokuthi uyisidala. By the way, ezinye izici zomzimba wayo sifana evenini - Izibuyekezo inothi. "Hyundai Getz" khona imoto okungavamile ngempela. Kanye Uphahla lwangaphakathi imitha-1.5-okusezingeni eliphezulu, izibuko ezinkulu kanye somoya okusezingeni eliphezulu, kusobala ukuthi wawufana evenini ezihlangene. Kodwa futhi uma ethatha ngakho ngaphakathi?
Ukubuyekezwa ( "Hyundai Getz") wezangaphakathi
Kuyaphawuleka ukuthi hatchback ngenxa gumbi yayo kwemicabango ergonomic ungavula ngisho sitimela lesidze kakhulu e Kujabulisa ngempela. Ngaphakathi "umntwana" futhi has a lot of izinto ezithakazelisayo - inothi ukubuyekezwa. "Hyundai Getz" kwaba ifakwe zonke izinhlobo emashalofini, igilavu gumbi, emaphaketheni ngezihluthu ngisho icala for isitoreji izibuko. Ngokuvamile, i-salon "umntwana" omunye obusebenzayo kakhulu. Ukuze kube lula kungaba sina ancintisane ngisho amancane edume kunazo zonke. I Yakha izinga wangaphakathi njalo baseKorea ezingeni eliphezulu kakhulu. By the way, naphezu lalilincane kahle, esikhaleni khulula kule gumbi kwaba impela eningi - inothi ukubuyekezwa. "Hyundai Getz" ngenxa ophahleni yayo flat, okuyinto ikuvumela ukuba sizikhandle ukubeka ngisho kwezihlahla ezinde kunazo zonke basketball, futhi ilungiselelo umcabango ukuphuma kwezihlalo bavunyelwe kahle ihlanganise wonke umuntu wahlala phambi noma emgqeni ongemuva lezihlalo.
Imoto ifakwe likaphethiloli izinjini ezintathu. Phakathi kwabo, omncane kunathi sonke nenjini 1.1-litre ephethe namandla 62 nje amahhashi. Yiqiniso, ukuze uqambe igama ashukumisayo ngaphezulu futhi emincanyana imoto enjalo kwakungenakwenzeka. Kubalandeli of umakhi isivinini kweqiniso amlungiselele izilinganiso ezingamakhulu amabili ephethe namandla 1.3 futhi 1.6 amalitha futhi amandla 82 futhi 105 amahhashi ngokulandelana. Ngenxa ukudluliswa ezinhlanu-speed has a "Mechanics" futhi 4-band "okuzenzakalelayo". Ngaphezu kwakho konke, yebo, baziswa automatic transmission - abashayeli bayo ngokuthi esisemqoka esiminyaminyeni sezimoto.
Mayelana izinkomba ukuphepha "Hyundai Getz" hatchbacks entsha ifakwe airbag amaningi, 3-iphuzu emotweni nama zokuzivikela imishayo steel ezivalweni, okuyinto ukuvikela abagibeli futhi umshayeli okungazelelwe ukushayisana lateral. By endleleni, "Hyundai Getz" Lesi esinye sezenzakalo izimoto ezimbalwa kowezi-2000 ayenendawo 2 ezihlalweni nge multi isigaba ezithothene isethi isizinda.
Ngokukhethekile, umthengi angakhetha eziningi amadivaysi. Lokhu evuthayo izihlalo, kanye uhlelo lwe-TRC, ABS, air conditioning, kanye nezinye "amawijethi" abaningi "izinsimbi kanye kuzwakala".
Ibhetri lemoto: ukubuyekezwa kanye ukuqhathanisa. Indlela ukukhetha ibhethri imoto
Ukukhokha "Megafon" "Ukuxhumana kwamadolobha"
"Isakhiwo disk lilimele, akunakwenzeka ukufunda." Okufanele ukwenze futhi indlela yokulungisa?
Inhlanzi ye-Chinook - "i-salmon prince"
Izinhlobo yokuhlanza izakhiwo